Louvre Ọkụ - Imewe Mmewe
Mọnde 22 Maachị 2021
Ọkụ Ìhè Louvre bụ oriọna tebụl mmekọrịta nke sitere na anwụ anwụ nke Greek na-agafe ngwa ngwa site na ndị mechiri emechi site na Louvres. Ochie nke mgbaaka iri abụọ, 6 nke cork na 14 nke Plexiglas, nke na-agbanwe iji usoro eji egwuri egwu wee gbanwee ntụgharị, olu na akara ikpeazụ nke ìhè ahụ dabere na mmasị ndị ọrụ chọrọ. Ìhè na-agabiga n’ime ihe ahụ ma na-akpata mgbasa, yabụ enweghị ndo n’onwe ya ma ọ bụ n’elu ihe ndị gbara ya gburugburu. Mgbaaka nwere oke dị iche iche na-enye ohere nke njikọta na-adịghị agwụ agwụ, nhazi nke nchekwa na njikwa ìhè zuru ezu.
Aha oru ngo : Louvre, Aha ndị na-emepụta ya : Natasha Chatziangeli, Aha onye ahịa : natasha chatziangeli.
Designkpụrụ a dị ịtụnanya bụ mmeri nke onyinye ọla ọcha na ejiji, uwe na asọmpi uwe.	Ga-ahụrịrị na ọkaibe ọlaọcha na-enweta ihe ngosipụta nke ndị na-emepụta ihe n ’ụlọ ahịa iji chọpụta ọtụtụ ụdị ọhụụ, ọhụụ, nke mbụ na okike, uwe na uwe ọrụ.
Ngwa ahia na ihe oru oku
The Curtain Ụlọ Ọrụ Ire Ahịa Wenezdee 21 Eprel
Stocker Oche Tiuzdee 20 Eprel
Reflexio Ilu Ihe Onyonyo Mọnde 19 Eprel
Maachị 2021 (93)
Febrụwarị 2021 (84)
Jenụwarị 2021 (93)
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Wenezdee 21 Eprel
Chepụta akụkọ mgbe ochie Tiuzdee 20 Eprel
Nhazi nke ubochi Mọnde 19 Eprel
Onye rụrụ ụbọchị Mbọsị Ụka 18 Eprel
Otu mmebe nke ụbọchị Satọdee 17 Eprel
Ọkụ Natasha Chatziangeli Louvre